आजको राशिफल : वि.स.२०७५ साल चैत १२ गते। मंगलबार । ईश्वी सन्२०१९ मार्च २६ तारिख । नेपाल सम्बत् ११३९ । तपाईको दिन शुभ रहोस् - PUBLICAAWAJ
आजको राशिफल : वि.स.२०७५ साल चैत १२ गते। मंगलबार । ईश्वी सन्२०१९ मार्च २६ तारिख । नेपाल सम्बत् ११३९ । तपाईको दिन शुभ रहोस्
प्रकाशित : सोमबार, चैत ११, २०७५१७:४८ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
वि.सं. २०७५ साल चैत १२ गते। मंगलबार। इश्वी सन् २०१९ मार्च २६ तारिख। शकसंवत् १९४०। विरोधकृत् संवत्सर। उत्तरायण। वसन्त ऋतु। नेपाल संवत् ११३९ चिल्लागा। चैत्र कृष्णपक्ष। तिथि– षष्ठी, २४:२४ बजेउप्रान्त सप्तमी। नक्षत्र– अनुराधा, ११:३४ बजेउप्रान्त ज्येष्ठा। योग– सिद्धि, २१:०९ बजेउप्रान्त व्यतीपात। करण– गर, १२:२४ बजेदेखि वणिज, २४:२४ बजेउप्रान्त भद्रा। आनन्दादिमा वज्र योग। चन्द्रराशि– वृश्चिक। काठमाडौंमा सूर्योदय– ६:०४ बजे, सूर्यास्त– १८:१७ बजे र दिनमान ३० घडी ३४ पला।
आज संसारिक विषयबात टाढा रहेर आध्यात्मिक विषयमा व्यस्त रहनु हुनेछ । यस विषयमा गहन चिन्ता शक्तिले तपाइँको सहायता गर्नेछ । रहश्यमय विद्या प्रति आज तपाइँको अधिक आकर्षण हुनेछ । आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हुने योग छ । वाणीमा संयमता अपनाउनु पर्नेछ । आज कुनै पनि नयाँ कार्यको शुरुवात नगर्नु उचित हुनेछ । आकस्मिक धन लाभ हुने योग छ ।
परिवारजनको साथ सामाजिक कार्यमा अथवा कुनै पर्यटन स्थलमा प्रवासको आनन्द प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ । व्यापारीगणको व्यापारमा वृद्धि हुने सम्भावना छ । सामाजिक क्षेत्रमा सफलता र यश-किर्ति प्राप्त हुनेछ ।आकस्मिक धनलाभको अधिक सम्भावना रहेको छ ।
आज तपाइँको दिन निकै राम्रो बित्नेछ । घरमा शान्ती र आनन्दको वातावरण रहनेछ । सुखमय प्रसङ्ग बन्नेछ । खर्च हुनेछ तर निरर्थक जाँदैन । आर्थिक लाभको सम्भावना रहेको छ । स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । कार्यमा यशको प्राप्ति हुनेछ । स्त्री मित्रको साथ भेट हुनेछ । रोकिएका कार्य सम्पन्न हुनेछन् । क्रोधको मात्रा अधिक रहनेछ । व्यर्थको उग्रतालाई हटाउनु होला । सहकर्मीको सहयोग मिल्नेच । प्रतिस्पर्धीमाथि विजय प्राप्त हुनेछ ।
आजको दिन तपाइँले थोरै सावधानी अपनाउनु पर्नेछ । शारीरिक एवम् मानसिक स्वास्थ्य बिग्रन सक्दछ । कुनै पनि नयाँ कार्यको लागी आजको दिन उचित छैन । मानसिक अशान्ती र निराशा तपाइँको मनमा छाइरहन्छ । खिन्नता रहनेछ । पेटको समस्याले सताउनेछ । आकस्मिक धन खर्च हुनेछ । अधिक कामुकता तपाइँको मन भंगको कारण बन्न सक्दछ ।
आजको तपाइँको दिन शुभ फलदायी छैन । घरमा वाद-विवादको वातावरण रहनेछ । परिवारजनको साथ यस्तो घटना घट्नेछ जसले तपाइँको मनमा ठेस पुर्याउन सक्दछ । शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । मनमा स्धिक निराशता छाउनेछ । तपाइँ केहि अधिक सम्बेदन्शील अनुभव गर्नु हुनेछ । पानि तथा स्त्रीबाट सम्हालिएर रहनु होला ।
आज कुनै पनि कार्यमा नसोची नबुझी भाग नलिनु होला । मित्रको साथ राम्रो समय बित्नेछ । भावनात्मक सम्बन्धमा तपाइँ नरम रहनु हुनेछ । भाइ-बहिनि बाट लाभ मिल्नेछ । प्रतिस्पर्धीको सामना गर्न सक्नु हुनेछ । रहस्यमयी विधामा सिद्धि मिल्नेछ ।
आज तपाइँको मन द्विविधामा उल्झनेछ । निर्णय लिन नसक्दा तपाइँले नयाँ कार्य प्रारम्भ गर्नु तपाइँको लागी हितकारी नहुन सक्छ । आज सम्बन्धमा औपचारिकता राख्नु होला । मनमुटावको सम्भावना छ । प्रवास हितकारी साबित हुनेछ । आर्थिक लाभ हुने योग छ ।
आजको दिन साधारणतय नै बित्नेछ । सुख एवम् आनन्दको प्राप्ती हुनेछ । स्नेहीजनबाट उपहार मिल्दा मन प्रशन्न हुनेछ । प्रियजनको साथ भएको भेटघाट सफल रहनेछ । सुभ समाचारको प्राप्ती हुनेछ । आनन्ददायक प्रवासको सम्भावना हुनेछ । उत्तम वैवाहिक सुखको अनुभूति हुनेछ ।
आजको दिन तपाइँको लागी कठिनाइले भरिपुर्ण हुनेछ । परिवारजनको स्काथ बहस हुनेछ । वाणीमा संयम राख्नु होला । मनको आवेशमा अंकुश लगाउनु पर्नेछ । अकास्मातबाट सम्हालिनु होला । शारीरिक स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ । धन खर्च हुनेछ ।
मित्र सम्बन्धिको साथको भेटले दिन आनन्दपूर्वक बित्नेछ । सामाजिक क्षेत्र, व्यापार तथा अन्य क्षेत्रमा तपाइँको लागी आजको दिन लाभदायक रहनेछ । जिवनसाथीको खोज गर्नेहरुलाई सरलतापूर्वक सफलता मिल्नेछ । प्रवास-पर्यटनको योग छ ।
आजको दिन शुभ फलदायी रहनेछ । आज प्रत्येक कार्यमा सरलता संग सफलता प्राप्त हुनेछ । परिणाम स्वरुप तपाइँ मानसिक रुपले प्रफुल्लित रहनु हुनेछ । नोकरीमा शिर्ष अधिकारीहरुको प्रशन्नताको कारण पदोन्नतिको योग छ । धन प्राप्तिको योग छ ।
मनको अस्वस्थताको कारण तपाइँ आज निराश रहनु हुनेछ । शारिरीमा थकान र आलस्य अनुभव हुनेछ । सन्तानको विषयमा चिन्ता रहनेछ । नकारात्मकतालाई महत्व नदिनु होला । आज कुनै पनि आवश्यक निर्णय नलिनु होला ।
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज साउन १४ गते मंगलबारको राशिफल !
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज जेष्ठ २८ गते मंगलबारको राशिफल !
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज असोज १८ गतेको राशिफल
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज मंसिर ६ गतेको राशिफल